Vaovao - Teknolojia vaovao an'ny DTS etona-rivotra mifangaro sterilization retort
DTS vao namboarina ny mpankafy setroka mivezivezy volo, ny haitao farany amin'ny indostria, ny fitaovana dia azo ampiharina amin'ny endrika fonosana isan-karazany, tsy mamono teboka mangatsiaka, haingam-pandeha haingana ary hafa tombony hafa.
Tsy mila esorina amin'ny etona ny kettle fanamorana sterilization. Ny fihodinan'ny mpankafy dia afaka manapaka ny lamosin'ny rivotra mangatsiaka, manery ny etona hitanjozotra manaraka ny fantson'ny rivotra, ary mamorona fivezivezena mifanitsy amin'ny elanelana amin'ny lovia sakafo, ka mihetsika ny setroka ao anaty vilany, ary miditra ny hafanana haingana kokoa ny sakafo, fanamiana bebe kokoa ny vokatry ny fanamorana. Mandritra ny fizotran'ny fanamorana dia tsy ilaina ny manafana, izay mamonjy ny fotoana fiomanana mialoha ary mampihena be ny fotoana fandidiana.
Ny fizotran'ny fanamainana sy ny fitehirizana ny hafanana dia tsy mampiasa rano, ary tsy mila etona mafana hanafanana ny rano fanodinana, izay afaka mamonjy fanjifana angovo betsaka sy fanjifana angovo rano.
Ny mpankafy turbo mifofofofo ao anaty valiny fanamafisam-peo fanaka dia hanery ny etona halefa amin'ny vokatra rehetra avy amin'ny faran'ny iray ka hatramin'ny faran'ny retort, manarona ny vokatra rehetra, ary mitazona hatrany ny fivezivezena etona ao amin'ny retort mba hanaovana ny fanamorana fa tsy misy hatsiaka.
Ny valin'ny sterilization karazana mpankafy dia manana fifehezana malalaka ny tsindry sy ny mari-pana, azo ahena ny tsindry aoriana, ary manana rindrambaiko maro karazana. Azo ampiharina amin'ny vokatra sterilization avo lenta rehetra toy ny fonosana malefaka, tavoahangy, kapoaka, sakafo sakafon-tsakafo ary vokatra hena.